Akukho bungozi: Inyikima enamandla inyikima iGrisi, iSipro kunye neTurkey
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseGrisi zokuPhula » Akukho bungozi: Inyikima enamandla inyikima iGrisi, iSipro kunye neTurkey
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeCyprus Breaking • Iindaba zase-Egypt eziQhekezayo • Iindaba zaseGrisi zokuPhula • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseTurkey zokuPhula
Akukho bungozi: Inyikima enamandla inyikima iGrisi, iSipro kunye neTurkey.
Iinyikima ezimbini ezinamandla zadontsa eKrete kwezi veki zidlulileyo, zibulala umntu omnye nokonakalisa izakhiwo. Ingcali yenyikima yaseGrisi yathi inyikima yangoLwesibini yavela kwimpazamo eyahlukileyo yaseAfrika kwaye akukho zanyikima zazilindelekile.
Ubungakanani benyikima bulinganiswe nge-6 kunye nobunzulu kwi-37.8km (23.5 yeemayile) yi-United States Geological Survey.
Abasemagunyeni kulawulo lwentlekele eTurkey, u-Afad, uxele le nyikima kwi-155km ukusuka kunxweme lwaseTurkey.
Inyikima enobukhulu bokuqala be-6 yabetha malunga ne-155km (96 yeekhilomitha) kude nedolophu yaseKas, kwiphondo laseAntalya.
Inyikima enamandla, enobukhulu obu-6 ihlasele izixeko kumazwe aliqela kwi-Mpuma yeMeditera ngokuhlwanje.
Inyikima inyikime iziqithi ezininzi eGrisi nakweminye imimandla ye-Mpuma yeMeditera, kubandakanya nengingqi esemazantsi e-Antalya eTurkey kunye nezixeko zase-Egypt.
Ukungcangcazela kwavakala kwiziqithi zaseKarpathos, eKrete, eSantorini naseRhodes eGrisi ngoMvulo.
Inyikima iphinde yagungqisa ikomkhulu laseCyprus iNicosia, iBeirut eLebanon, iCairo kunye nezinye izixeko zase-Egypt, iinxalenye zakwa-Israyeli kunye nePalestine Territories, kunye nommandla ojikeleze i-Antalya esemazantsi eTurkey.
U-Afad uthe inyikima enobunzima bokuqala be-6 yabetha kwi-155km (96 yeekhilomitha) kude nedolophu yaseKas, kwiphondo lase-Antalya.
Urhuluneli wesithili sikaKas, uSaban Arda Yazici, uthe abasemagunyeni abakhange bafumane naziphi na iingxelo zomonakalo okanye ukwenzakala eKas okanye kwiindawo ezingqongileyo.
Kwiveki ephelileyo, inyikima enkulu yolwandle i-6.3 kufutshane neCrete yothusa abantu. Yavakala ikude njengekomkhulu laseGrisi, iAthene, malunga neekhilomitha ezingama-400 (249 miles).
Kwiiveki ezintathu ezidlulileyo, inyikima eyomeleleyo efanayo eKrete yabulala umntu omnye.
I-Turkey, okwangoku, ihleli ngaphezulu kwemigca ephosakeleyo kunye neenyikima zihlala zihlala zikhona. Ubuncinane ngabantu abayi-17,000 abasweleke kwinyikima enkulu emantla ntshona eTurkey ngo-1999.